Kungani "isigodlo samazwi" kungaphezu kohlelo lokusebenza oluhle | Ukuqeqeshwa kwengqondo
Ngoba "Inqaba yamagama" ingaphezu nje kohlelo lokusebenza oluhle
Il I-26 May Ngibe nenjabulo yokubamba iqhaza njengesikhulumi, enkampanini ka-prof. USavelli noDkt Roppa, emcimbini wokwethulwa kohlelo lokusebenza "Isigodlo samagama" esidalwe ngokuqalisa I-Flick Lab (iqembu eliwinayo lomncintiswano wePIN Pugliesi INnovativi) okungowalo isazi sezokwelapha uDkt Chiara Lavopa.
Kakade phakathi kokungenelela kwami ​​e-Handimatica (nazi amaslayidi), Ngimemezele ukuthi kulo nyaka sizobona ukufika kwezinhlelo zokusebenza ezintsha nezithakazelisayo hhayi kangako ngenxa yezindlu ezinkulu zokushicilela - eziqhubeka nokugcina isimo sokulindela ezimakethe ezingumahamba nendlwana - ukuhlakanipha kosebenza nabo abasha ukuthi, kusukela ekwakhiweni kuye ekuqalisweni, bathatha ikusasa le-software elizinikele olimini nasekufundeni ubunzima ngesandla. Lezi yimizamo okufanele ikhuthazwe ngoba ikhombisa uthando olukhulu ngomsebenzi wayo ize ifike ezingeni lokuzibeka engcupheni yezamabhizinisi okwamanje akekho obonakala efuna ukuyithatha.
Ngokuqondene nokuqaliswa, singasho ukuthi "Inqaba yamagama" uhlelo lokusebenza olucatshangelwe kahle njengoba lunakekelwa ngokuningiliziwe. Imisebenzi ehlukene ehlobene ne- ukuthuthukiswa kwamakhono wobulinganiso zenziwe ngendlela ecophelelayo, okuholela ekubandakanyeni nasekuneliseni futhi ngokombono ocacile; ngaphezu kwalokho, aziboniswa njengekhathalogi yokuzivocavoca ongakhetha kuzo, kodwa zifakwa endabeni, enye into yokubandakanyeka okuqinile kwezingane. Umdlalo ngemuva komdlalo, umphikisi ngemuva komphikisi, ngaphansi kokuqondiswa ngumlingo uFlick, sizohamba ngamakamelo enqaba size sibhekane nodrako wokugcina, onqotshiwe esizoba ngamakhosi (noma izindlovukazi) zenqaba.
Imisebenzi, ihlukaniswe ngamazinga obunzima amathathu, ukukhathazeka:
I-phonemic synthesis / iRebus
Ukuhlukaniswa kwesigatshana nokwakheka
Ukunakekelwa ekufezekisweni komkhiqizo - nobuchwepheshe bomuntu osebenza naye osebenza ngezinkulumo - kungabonakala ku ukuhleleka kwemisebenzi othuthuka kusuka kokulula kakhulu kuya kweziyinkimbinkimbi ngokwengeziwe; Iseshini ngasinye sandulelwa yinye isigaba sokuqeqeshwa - lapho kuchazwa khona ngokucacile ukuthi yini edingekayo ngokuzivocavoca - futhi kugcina ngo umzuzu womvuzo, ihambisana njalo nesiqungo somdlalo.
Uhlelo lokusebenza alunamhawu ngezihloko ezikhiqizwa yimikhiqizo edumile: kuyabandakanyeka, kuyasebenza, kubhekwe yonke imininingwane. Uma bengifuna i-nitpick, bengingabona kuphela ukusetshenziswa kombala obomvu ukukhombisa izimpendulo ezifanele (ukwephulwa komhlangano wakudala obomvu umbala wephutha), ngenkathi siphakathi kwemikhawulo yokwenza ngcono ngokuqinisekile sinakho ukunwetshwa kwesikhuthazi (okuyinto, nokho, engeyona embalwa vele). Njengoba kwenzekile kuhlelo lokusebenza Amafonikhi anemifanekiso kungaba kuhle kakhulu ngelinye ilanga ukubona i-analogue "ebonakalayo" yomdlalo, enamathayili wemisebenzi ehlukene nebhodi elizomela umqansa wenqaba.
Imayelana ekugcineni uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lokuncoma hhayi kuphela izingane ezinenkinga yolimi, kepha kubo bonke abantwana, okuzijabulisa, bazokwazi ukuthuthukisa lawo makhono alusizo njengezidingo zokufunda zesikole.
Intengo ngokuqinisekile iphakeme kunesilinganiso sezinhlelo zokusebenza, kepha emugqeni (uma ungeyona ephansi) kunemikhiqizo ehlobene nale ndawo. Futhi, ngohlobo lwe-Android, ungalanda olulodwa demo yamahhala.
Umaki wokugcina: 10 cum laude I-Flick Lab!
ISIQINISEKISO SAMAZWI WO-AndroID
ISIBHALO SAMAZWI SE-iOS
android, uhlelo lokusebenza, Flick lab, ukudideka kwamagama, iOS, inkulumo Ukwelashwa, isingathekiso
Ngoba "Inqaba yamagama" ingaphezu nje kohlelo lokusebenza oluhle2018-06-112020-02-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2018/06/flicklab1.png200px200px
Ukubhala izimfuneko: ziyini?
Ukusebenza kobuchwepheshe obusha ekwelapheni okungahambi kahle ngemuva kokushaywa unhlangothi
Ukwelashwa kwenkulumo ye-post-stroke aphasia: kuyasiza?
Ukwelashwa kwenkulumo, i-coronavirus kanye nokuvuselelwa kabusha kwe-tele: imibhalo ewusizo
Izilabhasi kanye ne-metaphonology: Amakhadi ayi-160 anemisebenzi
Izindaba ezimnandi: ukufundwa okwabiwe kuyaphumelela (ikakhulukazi silulumagama)Imibhalo, ulimi, lwabazali
Ithebhulethi ne-aphasia: ucwaningo lukhombisa imiphumela yokuzilawula ekhayaI-Aphasia, ubuchwepheshe obusha